Ogaden News Agency (ONA) – Dab Qabsaday Suuq Ku Yaala Ruushka oo 64 Qof Ay Ku Dhinteen.
Dab Qabsaday Suuq Ku Yaala Ruushka oo 64 Qof Ay Ku Dhinteen.
Posted by ONA Admin	/ March 27, 2018
Ruushka ayaa sheegay in ugu yaraan 64 qof ay naftooda ku waayeen, kadib markii suuq ku yaala magaalada Kemerovo uu dab ka kacay. Wali waxaan raq iyo ruux la haynin dad badan kuwaas oo u badan caruur.
Nin ayaa u sheegay warbaahinta in ugu yaraan 40 caruur ah ay dabka ku geeriyoodeen. Suuqa waxaa ka buuxey dad markii dabku kacay, waxaana uu ka bilowdey dabaqa u sareeya, waxaana dabaqaas ku yaalay goob caruurtu ku ciyaaraan.
Kooxda dabka la dagaalanta ayaa dhibaato kala kulmay in ay damiyaan dabka ka cay dabaqa u sareeya, kadib markii uu isku dumay. Qaar kamid ah dadka ka soo badbaadey dabkan ayaa warbaahinta u sheegay in goobtu aysan lahayn dabdamiska biyaha ee iskood u furma markii dab kaco, sidoo kale albaabadu ku xidhmeen.
Ma cadda waxa dabkan kiciyey, waxaana jira warbixino kala duwan oo ka soo baxay sababta dabkan u kacay. Sida laga soo xiganayo ku-xigeenka badhasaabka Gobolka Kemerovo Mr. Vladimir Tjernov, dabku wuxuu ka kacay goobta caruurtu ku ciyaaraan gaar ahaan kadiifada lagu boodo, waxaana la aaminsan yahay in qof waalidka ka mid ah uu goobta uga tagay kabriidka sigaarka lagu shido. Wakaalada wararka ee Interfax ee dalka Ruushka ayaa sheegaysa in dabku ka dhashey fiiloyyin koronto.
Magaalada Kemerovo ayaa ku taala Gobolka Saybeeriya, waxaa ay caan ku tahay qodida macdanta, waxaa ku nool nus malyuun qof, waxaana ay caasimadda Moskow u jirtaa 3600km. Suuqa musiibadu ku habsatay ayaa la dhisay sanadkii 2013, waxaana uu ku fadhiyaa 23 000m².